Nikasa ny hanapaka làlana mihitsy izy ireo satria tsy mety ny fametrahana ity fitaovana ity. Efa im-betsaka ireo olona ireo no nisintona ny lakolosy fanairana saingy tsy nisy nihaino mihitsy hatreto. Matahotra ny ainy ireo olona vokatry ny fisintoman’ny pylône ny varatra ary koa ny fisian’ny « radiation » aterak’izany eo amin’ny manodidina.
Nivoaka tamin’ny fahanginany indray ny fikambanan’ny karàna izay mizaka ny zom-pirenena frantsay eto amintsika. Nilaza izy ireo fa karàna ihany no ao ambadiky ny kidnapping sasany ary ireo dia efa nitsoaka any ivelany rehefa azo ny volabe. Ireo malagasy sasany kosa izay efa naiditra am-ponja dia tsy taitra amin’izay saziny satria tsy nisy nogiazana akory ny fanànana izay efa azon’ireo ary dia toa ny miala sasatra fotsiny ireo any am-ponja. Mangataka ireo mpikambana ny mba hanafainganana ny fampiharana ny fanagiazana ny fanànana izy azo tamin’ny ratsy.
FIFAMOIVOIZANA MILA FANDAMINANA
Mila fandraisana andraikitra maika ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra satria lasa mamono olona isan’andro. Omaly dia zazavavikely izay namonjy fianarana no maty tsy tsa-drano nofaohin’ny kamiao nitatitra biriky. Tsy misy manaraka intsony ny lalàna izay mametra ny fiara lehibe tsy hiditra an-drenivohitra raha tsy amin’ny sivy ora alina. Etsy andanin’izany, lasa tery kely ny làlana satria ny « trottoir » dia feno fiara ary dia lasa mandeha amin’ny arabe ny olona. Isan’ny mikorontana indrindra ny fifamoivoizana eto amintsika maneran-tany.
Nidongy sy nangataka ny hahazo famotsoran-keloka avy amin'ny filoha tany Antanimora ireo gadra teo amin'ny lafiny politika toa an'i Claudine Razaimamonjy. Nangataka ny hihaona sy hiresaka mivantana amin'ny filoha ity farany fa toa tsy tanteraka. Nahagaga ny maro ihany koa ny fomba fitondrana manokana azy izay tsy dia miaraka amin'ny gadra vehivavy marobe izy fa kosa nanamboarana trano manokana ao am-ponjan’Antanimora. I Claudine sy Stéphanie kidnapping no gadra vehivavy izay tena isan’ny andrasana indrindra ao am-ponja ankehitriny.
Telo mianaka no indray nodorana velona tao an-tranony tany Ambohibary-Moramanga. Izany dia noho ny fifandirana lova teo amin’ny mpianakavy. Nokendrena mihitsy ny hahafaty ireo olona satria nodarohana aloha mba tsy hahatsiaro tena ary avy eo nodorana ny trano misy an’izy ireo. Fantatra avy hatrany ny tompon’antoka taorian’izay ary tsy iza fa ny anadahin’ilay ramatoa tompon-trano ihany. Voasambotra io lehilahy io rehefa nokarohan’ny zandary. Mbola mitohy mahoraka ao an-toerana ity raharaha ity satria tena nahatezitra loatra ny olona.
CAMERA DE SURVEILLANCE TSY MAMOKATRA
Tsy mbola hita ny tena vokatry ny fampiasana ny « camera de surveillance » napetaka etsy sy eroa. Toa haingon-tanàna fotsiny izany fa tsy hita ny tena vahaolana entiny, indrindra manoloana ny fitohanana lavareny eto an-drenivohitra. Eto amintsika dia toa lasa fanandramana avokoa ny zavatra efa voaporofo fa mahomby any ivelany. Eto Madagasikara irery no tsy mba mampiasa jiro maroloko izany amin’ny fandrindràna ny fifamoivoizana ary koa tsy mampiasa ny camera izay mifandray mivantana amin’ny mpitandro ny filaminana.
Lasa fanandramana tanteraka ny fanamboaran-dàlana eto Antananarivo. Nopotehina avokoa indray ny làlana etsy Andravoahangy Ambony ary naverina norarahana vato nanomboka afak’omaly. Avy eo izany dia horarahana goudron indray izany. Mba iza loatra ary ny injenera izay tompon’andraikitra amin’ireo fanamboarana ireo satria raha ny tsikaritra dia toa milalao fotsiny no atao. Isan’ny fandaniana be indrindra anefa ny fanamboaran-dàlana ary ny volam-bahoaka no hanamboarana izany.